Game Of Thrones ဇာတ်လမ်းမှ ရရှိနိုင်သည့် ဘ၀သင်ခန်းစာများ – Gentleman Magazine
Game Of Thrones ဇာတ်လမ်းမှ ရရှိနိုင်သည့် ဘ၀သင်ခန်းစာများ
နာမည်ကျော် Game Of Thrones ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲကို ကြည့်ဖူးတဲ့သူတွေအတွက် ဇာတ်လမ်းရဲ့ထူးခြားမှုတွေက ပြောစရာသိပ်မလိုလောက်ပါဘူး။ Game Of Thrones ဟာ ရက်ရက်စက်စက် ခေါင်းဖြတ်သတ်တဲ့အခန်းတွေ၊ အဖော်အချွတ်အခန်းတွေကြောင့်ချည်းပဲ နာမည်ကြီးနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ အလိုရမ္မက်၊ လောဘဒေါသနဲ့ အာဏာကို စွဲလမ်းတပ်မက်စိတ်တွေနဲ့ အမှန်နဲ့ အမှားကြားက အားပြိုင်မှုတွေကို လက်တွေ့ကျကျ သရုပ်ဖော်ထားနိုင်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းကြည့်ရင်း ခံယူတတ်မယ်ဆိုရင် ဘ၀အတွက် အသုံးဝင်မယ့် သင်ခန်းစားတွေကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် သိပ်မကြာခင်မှာ နောက်ထပ် Season7လည်း ထုတ်လွှင့်ပြသတော့မှာဆိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ Season ခြောက်ခုကို ကြည့်ရင်း ရရှိနိုင်တဲ့ လက်တွေ့ဘ၀မှာ ပြန်လည်အသုံးချလို့ ရနိုင်တဲ့ ဘ၀သင်ခန်းစာတွေကို ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။
၁။ ယုံကြည်ထိုက်သူကို သိထားပါ
မယုံကြည်သင့်တဲ့သူကို ယုံကြည်မိရင် သင့်ခေါင်းနဲ့ ကိုယ် အိုးစားကွဲသွားနိုင်တယ်ဆိုတာ Game of Thrones ထဲမှာ ကောင်းကောင်းသရုပ်ဖော်ထားပါတယ်။ မှန်ကန်တဲ့သူကို ယုံကြည်တာက သင့်အတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်တာလည်း သိသာပါတယ်။ နာမည်ကျော် Red Wedding အခန်းကို ကြည့်ဖူးတဲ့သူတိုင်း သိကြမှာပါ။ ဝေါလ်ဒါ ဖရေးကို ယုံကြည်မိတဲ့အတွက် ရော့ဘ်စတာ့ခ် အသတ်ခံလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကြည့်မယ်ဆိုရင် တိုင်ရီယွန် လန်နစ်စတာက လော့ဒ်ဗားရီးစ်ကို ယုံကြည်ဖို့ ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အတွက် ခေါင်းဖြတ်သတ်ခံရမယ့် ဘေးကို လွတ်မြောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ ဒီအခန်းတွေကို ကြည့်ခြင်းကနေ လူတွေအပေါ်ထားတဲ့ ယုံကြည်မှုက သင့်ဘ၀ကို ပြောင်းလဲစေနိုင်တာကို သင်ခန်းစာယူနိုင်ပါတယ်။
တကယ်လက်တွေ့ဘ၀မှာလည်း မယုံကြည်ထိုက်သူတွေနဲ့ ပတ်သက်မိရင် မိတ်ပျက်ရတာ၊ ချစ်သူလင်မယားကြား စကားများရတာ၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေ ဆုံးရှုံးရတာ စသဖြင့် တွေ့ကြုံရနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဘယ်သူ့ကိုမှ သင့်ရဲ့လျို့ဝှက်ချက်တွေ မပြောမိပါစေနဲ့။ အလုပ်ရှင်သူဌေးအကြောင်း လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကိုလည်း မပြောမိပါစေနဲ့။ အရေးကြီးပြီး အန္တရာယ်ရှိတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ဝေမျှတဲ့နေရာမှာ မှန်ကန်တဲ့သူကို ရွေးချယ်တတ်ဖို့ လိုပါတယ်။
၂။ သင့်ဖက်မှာ မိသားစုနဲ့ မိတ်ရင်းဆွေရင်းတွေပဲ ရှိတယ်
Game of Thrones ကို သေချာကြည့်မယ်ဆိုရင် မိသားစုကြီးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ မျိုးရိုး၊ သူတို့ရဲ့ အိမ်တော်၊ သူတို့ရဲ့ မိသားစုကို ကိုယ်စားပြုပြီး တိုက်ခိုက်ကြ၊ သေဆုံးကြ၊ အချင်းချင်းကာကွယ်ကြတာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ လန်နစ်စတာ၊ စတာ့ခ်၊ တာဂါရီယန် စတဲ့ မိသားစုတွေ၊ မျိုးရိုးတွေဟာ တစ်ယောက်ယောက် ဒုက္ခရောက်ပြီး အန္တရာယ်ကြုံပြီဆိုတာနဲ့ ဘာမဆိုလုပ်ဖို့ အသင့်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ မိသားစုဦးစားပေး စိတ်ကို မိဖုရား ဆာဆီ ထံမှာ ထင်ထင်ရှားရှားမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ သူမဟာ တကယ်ကိုစိတ်ဓာတ်မကောင်းတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် သူလုပ်သမျှအရာအားလုံးဟာ သူ့မိသားစုနဲ့ သူ့ကလေးတွေ အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်မိသားစုထက် သင့်အပေါ်ကောင်းနိုင်မယ့်သူ မရှိပါဘူး။ မိသားစုကို တန်ဖိုးထားတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။
သင့်အနေနဲ့ ဘ၀မှာအခက်အခဲတွေ ကြုံတွေ့ရပြီး ကူကယ်ရာမဲ့နေတဲ့အချိန်မှာ သင့်အနားမှာရှိနေမယ့်သူတွေက သင့်မိသားစုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မိသားစုကို အလေးထားပါ။ မိဘတွေကို ဆက်သွယ်ပါ။ ဂရုစိုက်ပါ။ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေအပေါ် ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံပါ။ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း မေ့မထားပါနဲ့။ တတ်နိုင်သမျှ ကြိုးစားဆက်သွယ်ပါ။
၃။ ဘ၀ဆိုတာက ခက်ခဲတယ်။
Game of Thrones ကို ကြည့်ရင်း သိသာထင်ရှားစွာ မြင်နိုင်တဲ့အချက်တစ်ခုက လောကကြီးဟာ အမြဲတမ်း သာယာပြီး ပျော်ရွှင်စရာ ကောင်းနေတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲ။ ဂျွန်စနိုးက သူ့လူတွေကပဲ သစ္စာဖောက်သွားခဲ့တယ်။ ဘရန်စတာ့ခ်က ဒုက္ခိတဖြစ်ပြီး လမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူး။ ဆာဆီရဲ့ သားနှစ်ယောက် သေခဲ့ရတယ်။ နက်စတာ့ခ်၊ ကိတ်တလင်းစတာ့ခ်နဲ့ ရော့ဘ် စတာ့ခ်တို့ဟာ လူပုံအလယ်မှာပဲ ရက်ရက်စက်စက် အသတ်ခံရတယ်။ သီယွန်ဂရေးဂျွိုင်းဟာလည်း ယောင်္ကျားအင်္ဂါကို ဆုံးရှုံးရပြီး လူတစ်ယောက်ရဲ့ ခံယူချက်တွေ ရိုက်ချိုးဖျက်စီးခံလိုက်ရတယ်။ စတန်းနစ်ဘရာသီယွန်ကလည်း သမီးဖြစ်သူကို မီးရှို့သတ်ဖို့ ကိုယ်တိုင်ပဲ အမိန့်ပေးခဲ့ရတယ်။ ဆက်ပြောရင် အများကြီးရှိပါသေးတယ်။ ဒါတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် ဇာတ်လမ်းထဲက ခုနှစ်ပြည်ထောင်လောကရဲ့ ရက်စက်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထဲက ဘယ်သူမှ အခက်အခဲတွေ၊ ဒုက္ခတွေ၊ နာကျဉ်မှုတွေနဲ့ မလွတ်နိုင်ကြပါဘူး။
တကယ့်လောကမှာလည်း ဘ၀ဆိုတာက ခက်ခဲကြမ်းတမ်းပါတယ်။ ပြီးပြည့်စုံတဲ့အလုပ်အကိုင်တစ်ခုနဲ့ ကျေနပ်စရာဘ၀တစ်ခုရဖို့ဆိုတာ မလွယ်ကူပါဘူး။ ဘယ်နေရာမှာမဆို ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေ၊ တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခက်အခဲတွေကို ဖြတ်ကျော်ပြီး သင့်ရည်မှန်းချက်တွေဆီကို ရောက်ဖို့အတွက် ရည်မှန်းချက်ထားပြီး စိတ်ရှည်သည်းခံနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။
၄။ အတွေ့အကြုံက ခွန်အားနဲ့ ရင့်ကျက်မှုကို ပေးတယ်။
Game of Thrones ထဲက အာရာစတာ့ခ်ကို ကြည့်ပါ။ ဒီကလေးမလေးဟာ သူ့အဖေကို လူပုံအလယ်မှာ ခေါင်းဖြတ်ကွပ်မြက်တာကို မြင်ခဲ့ရတယ်။ အားကိုးတကြီးသွားရှာတဲ့ အမေနဲ့ အကိုကြီး အသတ်ခံလိုက်ရတာကို သိလိုက်ရတယ်။ လန်နစ်စတာတွေက သူမရဲ့ မိသားစုကို တစစီဖြစ်အောင် လုပ်ပစ်လိုက်ကြတယ်။ အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဘ၀တစ်ခုကို တွေ့ကြုံခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် သူမက လွယ်လွယ်နဲ့ အရှုံးပေးတတ်သူ တစ်ယောက်မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ သူ့အဖေအတွက်၊ သူ့မိသားစုအတွက် လက်စားချေဖို့ နာမည်တွေ ခေါင်းထဲမှာအပြည့်ရှိနေပြီး ဓားရေးကောင်းအောင် လေ့ကျင့်ခဲ့တယ်။ အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး အကောင်းဆုံး လှုပ်ရှားခဲ့ရတယ်။ မျက်စိကန်းပြီး လမ်းဘေးမှာတောင်းစားရတဲ့အခြေအနေကနေ ပြန်လည် ရုန်းထနိုင်တဲ့ သူမရဲ့ စိတ်ဓာတ်မာကျောမှုကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အဆိုးတွေကို အားမလျော့တမ်းရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ လိုတယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်လာနိုင်ပါတယ်။
တကယ်လောကမှာလည်း အဆင်မပြေတာတွေ၊ အခက်အခဲတွေအတွက် ညည်းတွားနေတာက ဘာမှဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံရတဲ့ကိစ္စတွေကနေ အတွေ့အကြုံနဲ့ သင်ခန်းစာယူပါ။ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အမြင်နဲ့ မြင်တတ်ပြီး အားမလျှော့စတမ်းရှေ့ဆက်လျှောက်ပါ။ ဥပမာပြောရရင် စာမေးပွဲကြတာ ရှက်စရာပါ။ ဒါပေမယ့် ပြန်ပြင်လို့ရတဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် သေချာကြိုးစားပြီး နောက်တစ်ခါမှာ အကောင်းဆုံးရလဒ်ထွက်အောင် လုပ်ပါ။ လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ။ အတွေ့အကြုံတွေက ခွန်အားနဲ့ ရင့်ကျက်မှုကို ပေးနိုင်ပါတယ်။ အားမလျှော့ပါနဲ့။
၅။ အသိပညာက စွမ်းအား ဖြစ်တယ်။
လော့ဒ်ဗားရီးစ်မှာ တိုင်းပြည်အတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ၊ လျို့ဝှက်ချက်တွေ၊ အရေးကြီးသတင်းတွေကို သိရှိနိုင်ဖို့အတွက် နေရာအနှံ့ သူလျှိုကွန်ယက်တည်ဆောက်ထားပြီး နားတွေ၊ မျက်စိတွေအများကြီး ရှိပါတယ်။ ဒီအချက်ကပဲ သူ့ကို တန်ဖိုးရှိတဲ့လူတစ်ယောက် ဖြစ်နေစေပါတယ်။ မိဖုရားဆာဆီဟာလည်း ရန်သူတွေကို အကြပ်ကိုင်ချိမ်းခြောက်ပြီး သတင်းအချက်အလက်တွေ ရယူနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ လက်သန်းလေးကတော့ သူ့ရဲ့ အသိပညာကြွယ်ဝမှု၊ ပါးနပ်မှုတွေကြောင့် ဗြောင်းဆန်နေတဲ့ အခြေအနေမှာတောင်မှ ရှင်သန်နိုင်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ လူပုလေးတိုင်ရီယွန် လန်နစ်စတာဆိုရင်လည်း ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခွန်အားမရှိပေမယ့် အသိဥာဏ်ပညာနဲ့ လူတွေကို လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းရှိသူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သတိထားကြည့်ရင် ဒီလူတွေအားလုံး အခြားလူတွေလို့ သေဆုံးမသွားသေးပဲ အသက်ရှင်နေသေးတာကို တွေ့ရမှာပါ။ ဒါဟာ သူတို့ရဲ့ အသိပညာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်ကြောင့် အသိပညာ၊ အတတ်ပညာဟာ စွမ်းအားတစ်ခုဆိုတာကို သဘောပေါက်လာစေပါတယ်။
လက်တွေ့ဘ၀မှာလည်း ထိုနည်းတူပါပဲ။ ကျောင်းကသင်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး။ သင့်အနေနဲ့ နယ်ပယ်တစ်ခုမှာ ရှေ့ရောက်နေချင်ရင်၊ တခြားသူတွေ နင်းဖြတ်ကျော်တက်သွားတာ မခံချင်ဘူးဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အသိပညာဗဟုသုတတွေကို တတ်နိုင်သမျှ ဆည်းပူးလေ့လာနေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၆။ ဘယ်အရာမှ တစ်ယောက်တည်း မပြီးပါဘူး။
Game of Thrones မှာ နောက်ထပ်အသားပေးဖော်ပြထားတဲ့ အချက်တစ်ခုကတော့ အောင်မြင်မှု ကြီးကြီးမားမားကို အကောင်အထည်ဖော်ချင်ရင် တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်း အစွမ်းနဲ့ လုပ်လို့ မရဘူးဆိုတာပါပဲ။ နဂါးသုံးကောင်ရဲ့ မိခင် ခဲလက်စီတောင်မှ နယ်မြေသစ်တွေ ပိုပြီး သိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့အတွက် အကြံပေးပုဂ္ဂိုဟ်တွေ၊ အကူအညီပေးမယ့်သူတွေကို လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံး အပိုင်းမှာ ရမ်းဆေးလ် ဘိုတန်ရဲ့တပ်ကို တိုက်ခိုက်ပြီး ၀င်းတာဖဲလ်ကို ပြန်လည်သိမ်းယူဖို့အတွက် ဂျွန်စနိုးနဲ့ ဆန်ဆာစတာ့ခ်တို့ဟာလည်း မြောက်ပိုင်းက အိမ်တော်တွေကို သွားပြီး အကူအညီတောင်းခဲ့ရပါတယ်။ ဒီအချက်ကို ကြည့်ပြီး လိုအပ်တဲ့အခါတိုင်းမှာ အကူအညီတောင်းတတ်ဖို့ လိုတယ်ဆိုတာကို သိနိုင်ပါတယ်။
သင့်အနေနဲ့လည်း အလုပ်ပရောဂျက်တွေ၊ လုပ်ငန်းတွေကို တစ်ယောက်တည်းလုပ်လို့ ပြီးမြောက်အောင်မြင်သွားမယ်ဆိုရင် ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ယောက်တည်းစွမ်းအားနဲ့ တည်ဆောက်တဲ့ အောင်မြင်မှုဟာ သေးငယ်ပါတယ်။ ကြီးမားတဲ့ အောင်မြင်မှုကို ရယူချင်ရင်တော့ လိုအပ်တဲ့အကူအညီကို မှန်ကန်တဲ့လူတွေဆီက တောင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
၇။ လုပ်စရာရှိတာကို လုပ်ဆောင်ပါ။
ပက်ထရီဘဲလစ်ရ်ှနဲ့ ဒနဲရစ်တာဂါရီယန်(ခဲလက်စီ) တို့ဟာ သံပုလ္လင်နဲ့ ခုနှစ်ပြည်ထောင် ထီးနန်းကို သိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့ ရည်မှန်းချက်အတွက် လုပ်စရာရှိတာတွေကို အမြဲတမ်းလုပ်နေခဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အတွက် ဘာနည်းဗျူဟာမှမရှိ၊ ဘာလုပ်ဆောင်ချက်မှ မရှိတာဟာ တိုးတက်မှုမရှိတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျွန်းစနိုးဆိုရင်လည်း တိုက်ပွဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နိုင်ငံရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်စရာရှိတာကို ဦးဆောင်လုပ်တတ်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်ပဲ သူ့အပေါ်မှာ လူတွေက ယုံကြည်အားကိုးလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး။ Game of Thrones ထဲက ဇာတ်ရုပ်တိုင်းက သူတို့မှန်တယ်ထင်တာကို မတွန့်မဆုတ် လုပ်တတ်ကြပါတယ်။
ဒီလိုပါပဲ။ သင့်အနေနဲ့ တစ်ခုခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံးအချိန်ကို စောင့်မနေပါနဲ့။ လုပ်စရာရှိတာကို လုပ်ပါ။ လက်ရှိအလုပ်မှာ မပျော်ရင် နောက်ထပ် စိတ်ဝင်စားတဲ့အလုပ်တစ်ခုကို ပြောင်းပါ။ ကမ္ဘာလောကကြီးရဲ့ အလှအပကို လေ့လာပါ။ အချစ်ခံရတဲ့ ခံစားချက်နဲ့ အခြားသူတွေကို ချစ်တဲ့ခံစားချက်တွေကို ခံစားပါ။ ဘ၀ကို ဒီအတိုင်းထိုင်နေပြီး အလဟဿအဖြစ်မခံပါနဲ့။ စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ပါ။
၈။ အကောင်းအဆိုးနှစ်ခုစလုံး ကြံ့ကြံခံနိုင်ရမယ်။
Game of Thrones ဇာတ်လမ်းရဲ့ ထူးခြားချက်က အခြားဇာတ်လမ်းတွေလို ကောင်းတဲ့ဖက်က အမြဲနိုင်နေတာ မဟုတ်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ထားကောင်းလို့၊ ကောင်းတာတွေလုပ်လို့ အနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆက Game of Thrones ထဲမှာ မတွေ့ရပါဘူး။ ဒီလိုပါပဲ မကောင်းတာလုပ်တဲ့လူတွေ၊ စိတ်ထားမကောင်းတဲ့သူတွေကလည်း ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ဇာတ်သိမ်းသွားမယ်လို့ အာမမခံနိုင်ပါဘူး။ တစ်ခါတစ်လေမှာ လူဆိုးတွေက အောင်ပွဲခံပြီး လူကောင်းတွေ မရှုမလှရှုံးနိမ့်သွားရတတ်ပါတယ်။
အပြင်လောကမှာလည်း ဒီလိုပါပဲ။ လူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တိုင်း ကောင်းတာတွေပဲ ကြုံတွေ့ရမယ်လို့ မမျှော်လင့်ထားပါနဲ့။ မကောင်းတာတွေ လုပ်နေလို့ အဆိုးချည်းပဲ ဖြစ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘ၀ရဲ့သတ်မှတ်ချက်အရ အကောင်းတွေရှိသလို အဆိုးတွေလည်း ဖြတ်သန်းရမှာပါ။
၉။ လူတိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်ခံယူချက်နဲ့ အမြင်တွေရှိကြတယ်။
Game of Thrones ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ဇာတ်ဆောင်တွေရဲ့ မျက်လုံးကနေတဆင့် အမြင်အမျိုးမျိုးကို မြင်တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ မြို့တစ်မြို့ကို ကြည့်တဲ့နေရာပေါ်လိုက်ပြီး ရှုခင်းပြောင်းသလိုပဲ လူတိုင်းကလည်း သူတို့မြင်တွေ့တဲ့ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ကွဲပြားခြားနားတဲ့ အမြင်နဲ့ ခံယူချက်တွေ ရှိကြပါတယ်။ Game of Thrones ထဲမှာ အက်ဒက်စတာ့ခ်ဟာ ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အတွက် သူရဲကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အချည်းနှီး အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒနဲရစ်တာဂါရီယန်(ခဲလက်စီ)အတွက်တော့ သူမရဲ့ မိသားစုကို သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ လူသတ်သမားတစ်ယောက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြောက်ပိုင်းနံရံအပြင်ဖက်က အရိုင်းအစိုင်းတွေဟာ ခုနှစ်ပြည်ထောင်က လူတွေအတွက် လူရိုင်းသာသာဖြစ်ပေမယ့် မန့်ရေဒါနဲ့ ဂျွန်စနိုးတို့အတွက်တော့ လွတ်လပ်မှုကို မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားသူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ အနောက်ဖက်က အရှင်သခင်တွေအတွက် ခုနှစ်ပြည်ထောင်က အရေးကြီးပေမယ့် ကွာ့သ်မြို့ ကုန်သည်တွေအတွက်ကတော့ ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ ငွေကလွဲပြီး အခြားဘာမှ အရေးမကြီးပါဘူး။
အပြင်လောကမှာလည်း လူတစ်ဦးချင်းစီပေါ်မှာ မူတည်ပြီး မတူညီတဲ့အမြင်တွေ၊ အဓိပ္ပါယ်တွေရှိကြပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မီးနဲ့ရေလို ကွဲပြားနိုင်ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် လူတိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်ခံယူချက်နဲ့ အမြင်တွေရှိတယ်ဆိုတာကို နားလည်လက်ခံထားဖိုပ လိုပါတယ်။ ဒါဆိုရင် အခြားသူတွေကို ပိုနားလည်နိုင်ပြီး လူမှုဆက်ဆံရေး တိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
၁၀။ ကိုယ့်အပေါ် လူတွေရဲ့ ထင်မြင်ချက်က အရေးမကြီးဘူး။
Game of Thrones ထဲမှာ ဇာတ်ဆောင်စရိုက်မျိုးစုံကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ လူပုလေး တိုင်ရီယွန်၊ မျိုးမစစ်သား ဂျွန်စနိုး၊ ဒုက္ခိတ ဘရန်စတာ့ခ်၊ ကြေးစားသူရဲကောင်း ဒေးဗိုးစ် စသဖြင့် အများကြီးပါ။ ဇာတ်ဆောင်တိုင်းမှာ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်တွေ ရှိကြပါတယ်။ သူတို့အားလုံးဟာ ဒီအားနည်းချက်တွေကို လက်ခံထားပြီး သူတို့ရဲ့ အားသာချက်တွေနဲ့ ရပ်တည်ကြပါတယ်။ ဘရန်စတာ့ခ်ဟာ လမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့ ဒုက္ခိတဖြစ်ပေမယ့် Warg တစ်ယောက်ရဲ့ အစွမ်းတွေနဲ့ ရပ်တည်ပါတယ်။ တိုင်ရီယွန် လန်နစ်စတာဟာ လူပုလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့်…. သူဘယ်လိုတော်လဲ၊ ဘယ်လောက်ထိ အရည်အချင်းရှိလဲဆိုတာကို ကြည့်ဖူးရင် သိပါလိမ့်မယ်။
လက်တွေ့ဘ၀မှာလည်း လူတွေက သင့်ကို ဘယ်လိုမြင်တယ်၊ ဘယ်လိုသတ်မှတ်တယ်ဆိုတာက အရေးမကြီးပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ် ဘာလဲဆိုတာကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ သိနိုင်ပါတယ်။ လူတွေရဲ့ သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း လိုက်မယောင်မိပါစေနဲ့။ တိုင်ရီယွန် လန်နစ်စတာပြောသလိုပါပဲ။ သင့်ကိုယ်သင် ဘာဆိုတာလဲ မမေ့ရင် တစ်လောကလုံးကလည်း သင့်ကိုမေ့နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
၁၁။ အခြားသူတွေကို နားလည်ကိုယ်ချင်းစာနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။
လူတွေကို အကဲဖြတ်ဖို့က လွယ်ပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်လက်မခံတဲ့အရာတစ်ခု၊ မလုပ်သင့်ဘူးလို့ ယူဆထားတာတစ်ခုကို လုပ်လိုက်တာနဲ့ မကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်အဖြစ် တံဆိပ်ကပ် ဆက်ဆံဖို့ များပါတယ်။ Game of Thrones ကို ကြည့်တဲ့အခါမှာ အဓိကဇာတ်ဆောင်တွေရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အမှားတွေ၊ လုပ်ရပ်အမှားတွေကို တွေ့ရပေမယ့် သူတို့ဘာကြောင့် ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတာကို သိထားတဲ့အတွက် ကိုယ်ချင်းစာနိုင်ပါသေးတယ်။ သီယွန်ဂရေးဂျွိုင်းဟာ စတာ့ခ်မိသားစုကို ပြန်တိုက်ခိုက်တဲ့အတွက် ရက်စက်ယုတ်မာတဲ့သူတစ်ယောက်လို့ မြင်စရာရှိပေမယ့် သူ့ငယ်ဘ၀မှာ စတာ့ခ်တွေက ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းခံရတယ်။ သူ့အိမ်တော်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာ အရာအားလုံးက ပြောင်းလဲနေပြီး အမွေဆက်ဆံရဖို့အတွက် ဒီလိုလုပ်တဲ့အကြောင်းကို တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ မိဖုရားဆာဆီရဲ့ လုပ်ရပ်တွေဟာ သူ့ကလေးတွေပေါ်ထားတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကြောင့်ဆိုတာကိုလည်း တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဒီအချက်ဟာ လက်တွေ့လောကမှာ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူက ဘာကြောင့် ဒီစကားကိုပြောတာလဲ။ သင့်ကို တိုက်မိမလိုဖြစ်သွားတဲ့ ကားက ဘာကြောင့် ဒီလောက်အမြန်မောင်းသွားတာလဲ စတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကို စဉ်းစားနေဖို့ထက် သင်မကြိုက်တာတွေ လုပ်တဲ့အတွက် မကောင်းတဲ့လူအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တာက ပိုများပါလိမ့်မယ်။ လူတိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင် ထင်မြင်ချက်တွေ ရှိသလို အကြောင်းရင်းတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါကို နားလည်ထားရင် ကိုယ်ချင်းစာစိတ် ပိုထားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၂။ အချိန်တိုင်းက အရေးကြီးတယ်။
ဗော်လာ မော်ဂိုးလပ်စ်။ လူတိုင်းသေရမယ်။ ကျွန်တော်တို့ အများစုက သေခြင်းတရားနဲ့ အလှမ်းဝေးနေဆဲလို့ ထင်တတ်ကြပါတယ်။ Game of Thrones ထဲမှာတော့ သေခြင်းတရားဟာ မြင့်မြတ်တဲ့အရှင်သခင်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သူ့ဆီကိုမဆို အချိန်မရွေးရောက်လာနိုင်တာကို ပုံဖော်ထားပါတယ်။ သေခြင်းတရားက လက်တကမ်းအကွာမှာ အမြဲရှိနေတာကို မမေ့ပါနဲ့။ ဒါ့ကြောင့် ရှင်သန်နေခိုက်မှာ အချိန်တိုင်းက တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ သင် စိတ်ကူးထားတာတွေကို လုပ်ပါ။ ချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့ အချိန်ဖြုန်းပါ။ အချိန်အခိုက်အတန့်တိုင်းဟာ သင့်အတွက် နောက်ဆုံးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
ဒီအချက်တွေကတော့ Game of Thrones ဇာတ်လမ်းကြည့်ရင်း ရလာတဲ့ ဘ၀သင်ခန်းစာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ GM ပရိသတ်ထဲက Game of Thrones Fan တွေ ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် တွေးမိတဲ့ ဘ၀သင်ခန်းစာတွေနဲ့ ဘယ်ဇာတ်ဆောင်ကို အကြိုက်ဆုံးလဲ၊ ဘာကြောင့် ကြိုက်တာလဲဆိုတာတွေကို Comment မှာ ဝေမျှခဲ့စေချင်ပါတယ်။
Game Of Thrones ဇာတျလမျးမှ ရရှိနိုငျသညျ့ ဘဝသငျခနျးစာမြား
နာမညျကြျော Game Of Thrones ရုပျသံဇာတျလမျးတှဲကို ကွညျ့ဖူးတဲ့သူတှအေတှကျ ဇာတျလမျးရဲ့ထူးခွားမှုတှကေ ပွောစရာသိပျမလိုလောကျပါဘူး။ Game Of Thrones ဟာ ရကျရကျစကျစကျ ခေါငျးဖွတျသတျတဲ့အခနျးတှေ၊ အဖျောအခြှတျအခနျးတှကွေောငျ့ခညျြးပဲ နာမညျကွီးနတောမဟုတျပါဘူး။ အလိုရမ်မကျ၊ လောဘဒေါသနဲ့ အာဏာကို စှဲလမျးတပျမကျစိတျတှနေဲ့ အမှနျနဲ့ အမှားကွားက အားပွိုငျမှုတှကေို လကျတှကေ့ကြ သရုပျဖျောထားနိုငျတဲ့ ဇာတျလမျးတဈခုဖွဈပါတယျ။ ဇာတျလမျးကွညျ့ရငျး ခံယူတတျမယျဆိုရငျ ဘဝအတှကျ အသုံးဝငျမယျ့ သငျခနျးစားတှကေို ရရှိနိုငျပါတယျ။ အခုဆိုရငျ သိပျမကွာခငျမှာ နောကျထပျ Season7လညျး ထုတျလှငျ့ပွသတော့မှာဆိုတော့ ပွီးခဲ့တဲ့ Season ခွောကျခုကို ကွညျ့ရငျး ရရှိနိုငျတဲ့ လကျတှဘေ့ဝမှာ ပွနျလညျအသုံးခလြို့ ရနိုငျတဲ့ ဘဝသငျခနျးစာတှကေို ဝမြှေပေးခငျြပါတယျ။
၁။ ယုံကွညျထိုကျသူကို သိထားပါ
မယုံကွညျသငျ့တဲ့သူကို ယုံကွညျမိရငျ သငျ့ခေါငျးနဲ့ ကိုယျ အိုးစားကှဲသှားနိုငျတယျဆိုတာ Game of Thrones ထဲမှာ ကောငျးကောငျးသရုပျဖျောထားပါတယျ။ မှနျကနျတဲ့သူကို ယုံကွညျတာက သငျ့အတှကျ အကြိုးဖွဈထှနျးစနေိုငျတာလညျး သိသာပါတယျ။ နာမညျကြျော Red Wedding အခနျးကို ကွညျ့ဖူးတဲ့သူတိုငျး သိကွမှာပါ။ ဝေါလျဒါ ဖရေးကို ယုံကွညျမိတဲ့အတှကျ ရော့ဘျစတာ့ချ အသတျခံလိုကျတာဖွဈပါတယျ။ နောကျတဈခုကွညျ့မယျဆိုရငျ တိုငျရီယှနျ လနျနဈစတာက လော့ဒျဗားရီးဈကို ယုံကွညျဖို့ ရှေးခယျြလိုကျတဲ့အတှကျ ခေါငျးဖွတျသတျခံရမယျ့ ဘေးကို လှတျမွောကျသှားခဲ့ရပါတယျ။ ဒီအခနျးတှကေို ကွညျ့ခွငျးကနေ လူတှအေပျေါထားတဲ့ ယုံကွညျမှုက သငျ့ဘဝကို ပွောငျးလဲစနေိုငျတာကို သငျခနျးစာယူနိုငျပါတယျ။
တကယျလကျတှဘေ့ဝမှာလညျး မယုံကွညျထိုကျသူတှနေဲ့ ပတျသကျမိရငျ မိတျပကျြရတာ၊ ခဈြသူလငျမယားကွား စကားမြားရတာ၊ အလုပျအကိုငျအခှငျ့အလမျးတှေ ဆုံးရှုံးရတာ စသဖွငျ့ တှကွေုံ့ရနိုငျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ဘယျသူ့ကိုမှ သငျ့ရဲ့လြို့ဝှကျခကျြတှေ မပွောမိပါစနေဲ့။ အလုပျရှငျသူဌေးအကွောငျး လုပျဖျောကိုငျဖကျတှကေိုလညျး မပွောမိပါစနေဲ့။ အရေးကွီးပွီး အန်တရာယျရှိတဲ့ သတငျးအခကျြအလကျတှကေို ဝမြှေတဲ့နရောမှာ မှနျကနျတဲ့သူကို ရှေးခယျြတတျဖို့ လိုပါတယျ။
၂။ သငျ့ဖကျမှာ မိသားစုနဲ့ မိတျရငျးဆှရေငျးတှပေဲ ရှိတယျ
Game of Thrones ကို သခြောကွညျ့မယျဆိုရငျ မိသားစုကွီးတှဟော သူတို့ရဲ့ မြိုးရိုး၊ သူတို့ရဲ့ အိမျတျော၊ သူတို့ရဲ့ မိသားစုကို ကိုယျစားပွုပွီး တိုကျခိုကျကွ၊ သဆေုံးကွ၊ အခငျြးခငျြးကာကှယျကွတာကို တှနေို့ငျပါတယျ။ လနျနဈစတာ၊ စတာ့ချ၊ တာဂါရီယနျ စတဲ့ မိသားစုတှေ၊ မြိုးရိုးတှဟော တဈယောကျယောကျ ဒုက်ခရောကျပွီး အန်တရာယျကွုံပွီဆိုတာနဲ့ ဘာမဆိုလုပျဖို့ အသငျ့ဖွဈနတေတျပါတယျ။ မိသားစုဦးစားပေး စိတျကို မိဖုရား ဆာဆီ ထံမှာ ထငျထငျရှားရှားမွငျတှနေို့ငျပါတယျ။ သူမဟာ တကယျကိုစိတျဓာတျမကောငျးတဲ့ လူတဈယောကျဖွဈပမေယျ့ သူလုပျသမြှအရာအားလုံးဟာ သူ့မိသားစုနဲ့ သူ့ကလေးတှေ အတှကျဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ သငျ့မိသားစုထကျ သငျ့အပျေါကောငျးနိုငျမယျ့သူ မရှိပါဘူး။ မိသားစုကို တနျဖိုးထားတတျဖို့ လိုပါတယျ။
သငျ့အနနေဲ့ ဘဝမှာအခကျအခဲတှေ ကွုံတှရေ့ပွီး ကူကယျရာမဲ့နတေဲ့အခြိနျမှာ သငျ့အနားမှာရှိနမေယျ့သူတှကေ သငျ့မိသားစုပဲဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ မိသားစုကို အလေးထားပါ။ မိဘတှကေို ဆကျသှယျပါ။ ဂရုစိုကျပါ။ ညီအဈကိုမောငျနှမတှအေပျေါ ကောငျးကောငျးမှနျမှနျဆကျဆံပါ။ မိတျဆှသေူငယျခငျြးတှကေိုလညျး မမေ့ထားပါနဲ့။ တတျနိုငျသမြှ ကွိုးစားဆကျသှယျပါ။
၃။ ဘဝဆိုတာက ခကျခဲတယျ။
Game of Thrones ကို ကွညျ့ရငျး သိသာထငျရှားစှာ မွငျနိုငျတဲ့အခကျြတဈခုက လောကကွီးဟာ အမွဲတမျး သာယာပွီး ပြျောရှငျစရာ ကောငျးနတော မဟုတျဘူးဆိုတာပါပဲ။ ဂြှနျစနိုးက သူ့လူတှကေပဲ သစ်စာဖောကျသှားခဲ့တယျ။ ဘရနျစတာ့ချက ဒုက်ခိတဖွဈပွီး လမျးမလြှောကျနိုငျဘူး။ ဆာဆီရဲ့ သားနှဈယောကျ သခေဲ့ရတယျ။ နကျစတာ့ချ၊ ကိတျတလငျးစတာ့ချနဲ့ ရော့ဘျ စတာ့ချတို့ဟာ လူပုံအလယျမှာပဲ ရကျရကျစကျစကျ အသတျခံရတယျ။ သီယှနျဂရေးဂြှိုငျးဟာလညျး ယောင်ျကြားအင်ျဂါကို ဆုံးရှုံးရပွီး လူတဈယောကျရဲ့ ခံယူခကျြတှေ ရိုကျခြိုးဖကျြစီးခံလိုကျရတယျ။ စတနျးနဈဘရာသီယှနျကလညျး သမီးဖွဈသူကို မီးရှို့သတျဖို့ ကိုယျတိုငျပဲ အမိနျ့ပေးခဲ့ရတယျ။ ဆကျပွောရငျ အမြားကွီးရှိပါသေးတယျ။ ဒါတှကေိုကွညျ့မယျဆိုရငျ ဇာတျလမျးထဲက ခုနှဈပွညျထောငျလောကရဲ့ ရကျစကျမှုတှဖွေဈပါတယျ။ ဒီထဲက ဘယျသူမှ အခကျအခဲတှေ၊ ဒုက်ခတှေ၊ နာကဉျြမှုတှနေဲ့ မလှတျနိုငျကွပါဘူး။
တကယျ့လောကမှာလညျး ဘဝဆိုတာက ခကျခဲကွမျးတမျးပါတယျ။ ပွီးပွညျ့စုံတဲ့အလုပျအကိုငျတဈခုနဲ့ ကနြေပျစရာဘဝတဈခုရဖို့ဆိုတာ မလှယျကူပါဘူး။ ဘယျနရောမှာမဆို ပွိုငျဆိုငျမှုတှေ၊ တိုကျခိုကျမှုတှရှေိနပေါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အခကျအခဲတှကေို ဖွတျကြျောပွီး သငျ့ရညျမှနျးခကျြတှဆေီကို ရောကျဖို့အတှကျ ရညျမှနျးခကျြထားပွီး စိတျရှညျသညျးခံနိုငျဖို့ လိုပါတယျ။
၄။ အတှအေ့ကွုံက ခှနျအားနဲ့ ရငျ့ကကျြမှုကို ပေးတယျ။
Game of Thrones ထဲက အာရာစတာ့ချကို ကွညျ့ပါ။ ဒီကလေးမလေးဟာ သူ့အဖကေို လူပုံအလယျမှာ ခေါငျးဖွတျကှပျမွကျတာကို မွငျခဲ့ရတယျ။ အားကိုးတကွီးသှားရှာတဲ့ အမနေဲ့ အကိုကွီး အသတျခံလိုကျရတာကို သိလိုကျရတယျ။ လနျနဈစတာတှကေ သူမရဲ့ မိသားစုကို တစစီဖွဈအောငျ လုပျပဈလိုကျကွတယျ။ အရှယျနဲ့မလိုကျအောငျ ခကျခဲကွမျးတမျးတဲ့ဘဝတဈခုကို တှကွေုံ့ခဲ့ရတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူမက လှယျလှယျနဲ့ အရှုံးပေးတတျသူ တဈယောကျမဟုတျခဲ့ပါဘူး။ သူ့အဖအေတှကျ၊ သူ့မိသားစုအတှကျ လကျစားခဖြေို့ နာမညျတှေ ခေါငျးထဲမှာအပွညျ့ရှိနပွေီး ဓားရေးကောငျးအောငျ လကေ့ငျြ့ခဲ့တယျ။ အခွအေနပေျေါမူတညျပွီး အကောငျးဆုံး လှုပျရှားခဲ့ရတယျ။ မကျြစိကနျးပွီး လမျးဘေးမှာတောငျးစားရတဲ့အခွအေနကေနေ ပွနျလညျ ရုနျးထနိုငျတဲ့ သူမရဲ့ စိတျဓာတျမာကြောမှုကို တှနေို့ငျပါတယျ။ ဒါကိုကွညျ့ခွငျးအားဖွငျ့ အဆိုးတှကေို အားမလြော့တမျးရငျဆိုငျနိုငျဖို့ လိုတယျဆိုတာ သဘောပေါကျလာနိုငျပါတယျ။
တကယျလောကမှာလညျး အဆငျမပွတောတှေ၊ အခကျအခဲတှအေတှကျ ညညျးတှားနတောက ဘာမှဖွဈလာမှာ မဟုတျပါဘူး။ ရငျဆိုငျတှကွေုံ့ရတဲ့ကိစ်စတှကေနေ အတှအေ့ကွုံနဲ့ သငျခနျးစာယူပါ။ အပွုသဘောဆောငျတဲ့ အမွငျနဲ့ မွငျတတျပွီး အားမလြှော့စတမျးရှဆေ့ကျလြှောကျပါ။ ဥပမာပွောရရငျ စာမေးပှဲကွတာ ရှကျစရာပါ။ ဒါပမေယျ့ ပွနျပွငျလို့ရတဲ့ ကိစ်စမဟုတျပါဘူး။ ဒါ့ကွောငျ့ သခြောကွိုးစားပွီး နောကျတဈခါမှာ အကောငျးဆုံးရလဒျထှကျအောငျ လုပျပါ။ လုပျငနျးခှငျမှာလညျး ထိုနညျးလညျးကောငျးပါပဲ။ အတှအေ့ကွုံတှကေ ခှနျအားနဲ့ ရငျ့ကကျြမှုကို ပေးနိုငျပါတယျ။ အားမလြှော့ပါနဲ့။
၅။ အသိပညာက စှမျးအား ဖွဈတယျ။
လော့ဒျဗားရီးဈမှာ တိုငျးပွညျအတှငျးဖွဈပျေါနတေဲ့ အကွောငျးအရာတှေ၊ လြို့ဝှကျခကျြတှေ၊ အရေးကွီးသတငျးတှကေို သိရှိနိုငျဖို့အတှကျ နရောအနှံ့ သူလြှိုကှနျယကျတညျဆောကျထားပွီး နားတှေ၊ မကျြစိတှအေမြားကွီး ရှိပါတယျ။ ဒီအခကျြကပဲ သူ့ကို တနျဖိုးရှိတဲ့လူတဈယောကျ ဖွဈနစေပေါတယျ။ မိဖုရားဆာဆီဟာလညျး ရနျသူတှကေို အကွပျကိုငျခြိမျးခွောကျပွီး သတငျးအခကျြအလကျတှေ ရယူနိုငျစှမျးရှိပါတယျ။ လကျသနျးလေးကတော့ သူ့ရဲ့ အသိပညာကွှယျဝမှု၊ ပါးနပျမှုတှကွေောငျ့ ဗွောငျးဆနျနတေဲ့ အခွအေနမှောတောငျမှ ရှငျသနျနိုငျသူ ဖွဈပါတယျ။ လူပုလေးတိုငျရီယှနျ လနျနဈစတာဆိုရငျလညျး ရုပျပိုငျးဆိုငျရာ ခှနျအားမရှိပမေယျ့ အသိဉာဏျပညာနဲ့ လူတှကေို လှမျးမိုးခြုပျကိုငျနိုငျစှမျးရှိသူ တဈယောကျဖွဈပါတယျ။ သတိထားကွညျ့ရငျ ဒီလူတှအေားလုံး အခွားလူတှလေို့ သဆေုံးမသှားသေးပဲ အသကျရှငျနသေေးတာကို တှရေ့မှာပါ။ ဒါဟာ သူတို့ရဲ့ အသိပညာကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ။ ဒီအခကျြကွောငျ့ အသိပညာ၊ အတတျပညာဟာ စှမျးအားတဈခုဆိုတာကို သဘောပေါကျလာစပေါတယျ။
လကျတှဘေ့ဝမှာလညျး ထိုနညျးတူပါပဲ။ ကြောငျးကသငျပေးလိုကျရုံနဲ့ မလုံလောကျပါဘူး။ သငျ့အနနေဲ့ နယျပယျတဈခုမှာ ရှရေ့ောကျနခေငျြရငျ၊ တခွားသူတှေ နငျးဖွတျကြျောတကျသှားတာ မခံခငျြဘူးဆိုရငျ သကျဆိုငျရာနယျပယျနဲ့ပတျသကျပွီး အသိပညာဗဟုသုတတှကေို တတျနိုငျသမြှ ဆညျးပူးလလေ့ာနရေမှာ ဖွဈပါတယျ။
၆။ ဘယျအရာမှ တဈယောကျတညျး မပွီးပါဘူး။
Game of Thrones မှာ နောကျထပျအသားပေးဖျောပွထားတဲ့ အခကျြတဈခုကတော့ အောငျမွငျမှု ကွီးကွီးမားမားကို အကောငျအထညျဖျောခငျြရငျ တဈဦးတဈယောကျတညျး အစှမျးနဲ့ လုပျလို့ မရဘူးဆိုတာပါပဲ။ နဂါးသုံးကောငျရဲ့ မိခငျ ခဲလကျစီတောငျမှ နယျမွသေဈတှေ ပိုပွီး သိမျးပိုကျနိုငျဖို့အတှကျ အကွံပေးပုဂ်ဂိုဟျတှေ၊ အကူအညီပေးမယျ့သူတှကေို လိုအပျခဲ့ပါတယျ။ နောကျဆုံး အပိုငျးမှာ ရမျးဆေးလျ ဘိုတနျရဲ့တပျကို တိုကျခိုကျပွီး ၀ငျးတာဖဲလျကို ပွနျလညျသိမျးယူဖို့အတှကျ ဂြှနျစနိုးနဲ့ ဆနျဆာစတာ့ချတို့ဟာလညျး မွောကျပိုငျးက အိမျတျောတှကေို သှားပွီး အကူအညီတောငျးခဲ့ရပါတယျ။ ဒီအခကျြကို ကွညျ့ပွီး လိုအပျတဲ့အခါတိုငျးမှာ အကူအညီတောငျးတတျဖို့ လိုတယျဆိုတာကို သိနိုငျပါတယျ။
သငျ့အနနေဲ့လညျး အလုပျပရောဂကျြတှေ၊ လုပျငနျးတှကေို တဈယောကျတညျးလုပျလို့ ပွီးမွောကျအောငျမွငျသှားမယျဆိုရငျ ကောငျးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ တဈယောကျတညျးစှမျးအားနဲ့ တညျဆောကျတဲ့ အောငျမွငျမှုဟာ သေးငယျပါတယျ။ ကွီးမားတဲ့ အောငျမွငျမှုကို ရယူခငျြရငျတော့ လိုအပျတဲ့အကူအညီကို မှနျကနျတဲ့လူတှဆေီက တောငျးဖို့လိုအပျပါတယျ။
၇။ လုပျစရာရှိတာကို လုပျဆောငျပါ။
ပကျထရီဘဲလဈရျှနဲ့ ဒနဲရဈတာဂါရီယနျ(ခဲလကျစီ) တို့ဟာ သံပုလ်လငျနဲ့ ခုနှဈပွညျထောငျ ထီးနနျးကို သိမျးပိုကျနိုငျဖို့ ရညျမှနျးခကျြအတှကျ လုပျစရာရှိတာတှကေို အမွဲတမျးလုပျနခေဲ့သူတှေ ဖွဈပါတယျ။ သူတို့အတှကျ ဘာနညျးဗြူဟာမှမရှိ၊ ဘာလုပျဆောငျခကျြမှ မရှိတာဟာ တိုးတကျမှုမရှိတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဂြှနျးစနိုးဆိုရငျလညျး တိုကျပှဲမှာပဲဖွဈဖွဈ၊ နိုငျငံရေးမှာပဲဖွဈဖွဈ လုပျစရာရှိတာကို ဦးဆောငျလုပျတတျသူ ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ပဲ သူ့အပျေါမှာ လူတှကေ ယုံကွညျအားကိုးလာကွတာဖွဈပါတယျ။ ဒါတငျမကသေးပါဘူး။ Game of Thrones ထဲက ဇာတျရုပျတိုငျးက သူတို့မှနျတယျထငျတာကို မတှနျ့မဆုတျ လုပျတတျကွပါတယျ။
ဒီလိုပါပဲ။ သငျ့အနနေဲ့ တဈခုခုလုပျတော့မယျဆိုရငျ အကောငျးဆုံးအခြိနျကို စောငျ့မနပေါနဲ့။ လုပျစရာရှိတာကို လုပျပါ။ လကျရှိအလုပျမှာ မပြျောရငျ နောကျထပျ စိတျဝငျစားတဲ့အလုပျတဈခုကို ပွောငျးပါ။ ကမ်ဘာလောကကွီးရဲ့ အလှအပကို လလေ့ာပါ။ အခဈြခံရတဲ့ ခံစားခကျြနဲ့ အခွားသူတှကေို ခဈြတဲ့ခံစားခကျြတှကေို ခံစားပါ။ ဘဝကို ဒီအတိုငျးထိုငျနပွေီး အလဟဿအဖွဈမခံပါနဲ့။ စိတျကူးအိပျမကျတှကေို အကောငျအထညျဖျောပါ။
၈။ အကောငျးအဆိုးနှဈခုစလုံး ကွံ့ကွံခံနိုငျရမယျ။
Game of Thrones ဇာတျလမျးရဲ့ ထူးခွားခကျြက အခွားဇာတျလမျးတှလေို ကောငျးတဲ့ဖကျက အမွဲနိုငျနတော မဟုတျတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ စိတျထားကောငျးလို့၊ ကောငျးတာတှလေုပျလို့ အနိုငျရမယျဆိုတဲ့ အယူအဆက Game of Thrones ထဲမှာ မတှရေ့ပါဘူး။ ဒီလိုပါပဲ မကောငျးတာလုပျတဲ့လူတှေ၊ စိတျထားမကောငျးတဲ့သူတှကေလညျး ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ဇာတျသိမျးသှားမယျလို့ အာမမခံနိုငျပါဘူး။ တဈခါတဈလမှော လူဆိုးတှကေ အောငျပှဲခံပွီး လူကောငျးတှေ မရှုမလှရှုံးနိမျ့သှားရတတျပါတယျ။
အပွငျလောကမှာလညျး ဒီလိုပါပဲ။ လူကောငျးတဈယောကျဖွဈတိုငျး ကောငျးတာတှပေဲ ကွုံတှရေ့မယျလို့ မမြှျောလငျ့ထားပါနဲ့။ မကောငျးတာတှေ လုပျနလေို့ အဆိုးခညျြးပဲ ဖွဈနမှောမဟုတျပါဘူး။ ဘဝရဲ့သတျမှတျခကျြအရ အကောငျးတှရှေိသလို အဆိုးတှလေညျး ဖွတျသနျးရမှာပါ။
၉။ လူတိုငျးမှာ ကိုယျပိုငျခံယူခကျြနဲ့ အမွငျတှရှေိကွတယျ။
Game of Thrones ဇာတျလမျးထဲမှာ ဇာတျဆောငျတှရေဲ့ မကျြလုံးကနတေဆငျ့ အမွငျအမြိုးမြိုးကို မွငျတှရေ့နိုငျပါတယျ။ မွို့တဈမွို့ကို ကွညျ့တဲ့နရောပျေါလိုကျပွီး ရှုခငျးပွောငျးသလိုပဲ လူတိုငျးကလညျး သူတို့မွငျတှတေဲ့ပျေါမှာ မူတညျပွီး ကှဲပွားခွားနားတဲ့ အမွငျနဲ့ ခံယူခကျြတှေ ရှိကွပါတယျ။ Game of Thrones ထဲမှာ အကျဒကျစတာ့ချဟာ ကွညျ့ရှုသူပရိသတျအတှကျ သူရဲကောငျးတဈယောကျဖွဈပွီး အခညျြးနှီး အသကျဆုံးရှုံးခဲ့သူဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒနဲရဈတာဂါရီယနျ(ခဲလကျစီ)အတှကျတော့ သူမရဲ့ မိသားစုကို သတျဖွတျခဲ့တဲ့ လူသတျသမားတဈယောကျသာ ဖွဈပါတယျ။ မွောကျပိုငျးနံရံအပွငျဖကျက အရိုငျးအစိုငျးတှဟော ခုနှဈပွညျထောငျက လူတှအေတှကျ လူရိုငျးသာသာဖွဈပမေယျ့ မနျ့ရဒေါနဲ့ ဂြှနျစနိုးတို့အတှကျတော့ လှတျလပျမှုကို မွတျနိုးတနျဖိုးထားသူတှေ ဖွဈကွပါတယျ။ အနောကျဖကျက အရှငျသခငျတှအေတှကျ ခုနှဈပွညျထောငျက အရေးကွီးပမေယျ့ ကှာ့သျမွို့ ကုနျသညျတှအေတှကျကတော့ ကုနျသှယျရေးနဲ့ ငှကေလှဲပွီး အခွားဘာမှ အရေးမကွီးပါဘူး။
အပွငျလောကမှာလညျး လူတဈဦးခငျြးစီပျေါမှာ မူတညျပွီး မတူညီတဲ့အမွငျတှေ၊ အဓိပ်ပါယျတှရှေိကွပါတယျ။ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ မီးနဲ့ရလေို ကှဲပွားနိုငျကွပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ လူတိုငျးမှာ ကိုယျပိုငျခံယူခကျြနဲ့ အမွငျတှရှေိတယျဆိုတာကို နားလညျလကျခံထားဖိုပ လိုပါတယျ။ ဒါဆိုရငျ အခွားသူတှကေို ပိုနားလညျနိုငျပွီး လူမှုဆကျဆံရေး တိုးတကျလာမှာဖွဈပါတယျ။
၁၀။ ကိုယျ့အပျေါ လူတှရေဲ့ ထငျမွငျခကျြက အရေးမကွီးဘူး။
Game of Thrones ထဲမှာ ဇာတျဆောငျစရိုကျမြိုးစုံကို တှနေို့ငျပါတယျ။ လူပုလေး တိုငျရီယှနျ၊ မြိုးမစဈသား ဂြှနျစနိုး၊ ဒုက်ခိတ ဘရနျစတာ့ချ၊ ကွေးစားသူရဲကောငျး ဒေးဗိုးဈ စသဖွငျ့ အမြားကွီးပါ။ ဇာတျဆောငျတိုငျးမှာ အားသာခကျြ၊ အားနညျးခကျြတှေ ရှိကွပါတယျ။ သူတို့အားလုံးဟာ ဒီအားနညျးခကျြတှကေို လကျခံထားပွီး သူတို့ရဲ့ အားသာခကျြတှနေဲ့ ရပျတညျကွပါတယျ။ ဘရနျစတာ့ချဟာ လမျးမလြှောကျနိုငျတဲ့ ဒုက်ခိတဖွဈပမေယျ့ Warg တဈယောကျရဲ့ အစှမျးတှနေဲ့ ရပျတညျပါတယျ။ တိုငျရီယှနျ လနျနဈစတာဟာ လူပုလေးတဈယောကျဖွဈပမေယျ့…. သူဘယျလိုတျောလဲ၊ ဘယျလောကျထိ အရညျအခငျြးရှိလဲဆိုတာကို ကွညျ့ဖူးရငျ သိပါလိမျ့မယျ။
လကျတှဘေ့ဝမှာလညျး လူတှကေ သငျ့ကို ဘယျလိုမွငျတယျ၊ ဘယျလိုသတျမှတျတယျဆိုတာက အရေးမကွီးပါဘူး။ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ နားလညျသဘောပေါကျဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။ ကိုယျ ဘာလဲဆိုတာကို ကိုယျကိုယျတိုငျပဲ သိနိုငျပါတယျ။ လူတှရေဲ့ သတျမှတျခကျြအတိုငျး လိုကျမယောငျမိပါစနေဲ့။ တိုငျရီယှနျ လနျနဈစတာပွောသလိုပါပဲ။ သငျ့ကိုယျသငျ ဘာဆိုတာလဲ မမရေ့ငျ တဈလောကလုံးကလညျး သငျ့ကိုမနေို့ငျမှာ မဟုတျပါဘူး။
၁၁။ အခွားသူတှကေို နားလညျကိုယျခငျြးစာနိုငျအောငျ ကွိုးစားပါ။
လူတှကေို အကဲဖွတျဖို့က လှယျပါတယျ။ တဈစုံတဈယောကျက သငျ့လကျမခံတဲ့အရာတဈခု၊ မလုပျသငျ့ဘူးလို့ ယူဆထားတာတဈခုကို လုပျလိုကျတာနဲ့ မကောငျးတဲ့လူတဈယောကျအဖွဈ တံဆိပျကပျ ဆကျဆံဖို့ မြားပါတယျ။ Game of Thrones ကို ကွညျ့တဲ့အခါမှာ အဓိကဇာတျဆောငျတှရေဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြအမှားတှေ၊ လုပျရပျအမှားတှကေို တှရေ့ပမေယျ့ သူတို့ဘာကွောငျ့ ဒီလိုလုပျတယျဆိုတာကို သိထားတဲ့အတှကျ ကိုယျခငျြးစာနိုငျပါသေးတယျ။ သီယှနျဂရေးဂြှိုငျးဟာ စတာ့ချမိသားစုကို ပွနျတိုကျခိုကျတဲ့အတှကျ ရကျစကျယုတျမာတဲ့သူတဈယောကျလို့ မွငျစရာရှိပမေယျ့ သူ့ငယျဘဝမှာ စတာ့ချတှကေ ချေါဆောငျသှားခွငျးခံရတယျ။ သူ့အိမျတျောပွနျရောကျတဲ့အခါမှာ အရာအားလုံးက ပွောငျးလဲနပွေီး အမှဆေကျဆံရဖို့အတှကျ ဒီလိုလုပျတဲ့အကွောငျးကို တှမွေ့ငျနိုငျပါတယျ။ မိဖုရားဆာဆီရဲ့ လုပျရပျတှဟော သူ့ကလေးတှပေျေါထားတဲ့ ခဈြခွငျးမတ်ေတာကွောငျ့ဆိုတာကိုလညျး တှနေို့ငျပါတယျ။
ဒီအခကျြဟာ လကျတှလေ့ောကမှာ ပြောကျဆုံးနတေဲ့အခကျြတဈခုဖွဈပါတယျ။ သူငယျခငျြးဖွဈသူက ဘာကွောငျ့ ဒီစကားကိုပွောတာလဲ။ သငျ့ကို တိုကျမိမလိုဖွဈသှားတဲ့ ကားက ဘာကွောငျ့ ဒီလောကျအမွနျမောငျးသှားတာလဲ စတဲ့အကွောငျးရငျးတှကေို စဉျးစားနဖေို့ထကျ သငျမကွိုကျတာတှေ လုပျတဲ့အတှကျ မကောငျးတဲ့လူအဖွဈသတျမှတျလိုကျတာက ပိုမြားပါလိမျ့မယျ။ လူတိုငျးမှာ ကိုယျပျိုငျ ထငျမွငျခကျြတှေ ရှိသလို အကွောငျးရငျးတှလေညျး ရှိပါတယျ။ ဒါကို နားလညျထားရငျ ကိုယျခငျြးစာစိတျ ပိုထားနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
၁၂။ အခြိနျတိုငျးက အရေးကွီးတယျ။
ဗျောလာ မျောဂိုးလပျဈ။ လူတိုငျးသရေမယျ။ ကြှနျတျောတို့ အမြားစုက သခွေငျးတရားနဲ့ အလှမျးဝေးနဆေဲလို့ ထငျတတျကွပါတယျ။ Game of Thrones ထဲမှာတော့ သခွေငျးတရားဟာ မွငျ့မွတျတဲ့အရှငျသခငျတဈယောကျပဲဖွဈဖွဈ၊ ဆငျးရဲနှမျးပါးတဲ့ ကလေးတဈယောကျပဲဖွဈဖွဈ ဘယျသူ့ဆီကိုမဆို အခြိနျမရှေးရောကျလာနိုငျတာကို ပုံဖျောထားပါတယျ။ သခွေငျးတရားက လကျတကမျးအကှာမှာ အမွဲရှိနတောကို မမပေ့ါနဲ့။ ဒါ့ကွောငျ့ ရှငျသနျနခေိုကျမှာ အခြိနျတိုငျးက တနျဖိုးရှိပါတယျ။ သငျ စိတျကူးထားတာတှကေို လုပျပါ။ ခဈြခငျရသူတှနေဲ့ အခြိနျဖွုနျးပါ။ အခြိနျအခိုကျအတနျ့တိုငျးဟာ သငျ့အတှကျ နောကျဆုံးဖွဈသှားနိုငျပါတယျ။
ဒီအခကျြတှကေတော့ Game of Thrones ဇာတျလမျးကွညျ့ရငျး ရလာတဲ့ ဘဝသငျခနျးစာတှေ ဖွဈပါတယျ။ GM ပရိသတျထဲက Game of Thrones Fan တှေ ရှိခဲ့မယျဆိုရငျ တှေးမိတဲ့ ဘဝသငျခနျးစာတှနေဲ့ ဘယျဇာတျဆောငျကို အကွိုကျဆုံးလဲ၊ ဘာကွောငျ့ ကွိုကျတာလဲဆိုတာတှကေို Comment မှာ ဝမြှေခဲ့စခေငျြပါတယျ။
Previous: အလုပ်ရှင် အထက်လူကြီး သဘောကျသည့် အလေ့အကျင့်များ
Next: သက်ရှည်ကျန်းမာစေနိုင်သည့် အစားအစာ (၇)မျိုး